चितवनका दर्जन अस्पताल मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा, न गरिबलाई छुट न कर्मचारीलाई नियुक्तिपत्र – Health Post Nepal
चितवनका दर्जन अस्पताल मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा, न गरिबलाई छुट न कर्मचारीलाई नियुक्तिपत्र
२०७५ फागुन ९ गते १७:३७
चितवन जिल्लाका अधिकांश अस्पताल मापदण्डविपरीत सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ । स्वास्थ्यसेवा विभागले एक दर्जन अस्पतालमा गरेको अनुगमनका क्रममा कुनै पनि अस्पतालले स्वास्थ्य निर्देशिकाअनुसार लगभग कुनै पनि मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएको हो । अस्पतालहरुले गरिब तथा असहाय बिरामीलाई दिनुपर्ने निःशुल्क उपचारसेवा त दिएका छैनन् नै, आवश्यक कर्मचारी दरबन्दीसमेत पूरा गरेका छैनन् ।
स्वास्थ्यसेवा ऐनमा प्रत्येक अस्पतालले १० प्रतिशत गरिब बिरामीलाई निःशुल्क सेवा प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, चितवनका अस्पतालले असहाय बिरामीलाई तोकिएको निःशुल्क सेवा नदिएको स्वास्थ्यसेवा विभागका निर्देशक डा. मनीषा रावलले जानकारी दिइन् । असहाय बिरामीका लागि छुट्टै शय्याको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था भए भए अस्पतालहरूले नगरेको उनले जानकारी दिइन् । अनुगमनका क्रममा चितवनका अस्पतालहरूले आफ्ना कर्मचारीलाई नियुक्तिपत्र नदिई काम गराएको र आवश्यकताअनुसार जनशक्ति नराखेको पाइएको डा. रावलको भनाइ छ ।
रावलको नेतृत्वमा आएको टोलीले चितवनका ५० देखि २ सय शय्यासम्मका १२ अस्पतालको अनुगमन गरेको थियो । तीमध्ये चितवन अस्पताल, आशा अस्पताल र सेन्ट्रल अस्पतालले आवश्यक जनशक्ति नराखेको र कार्यरत कर्मचारीलाई नियुक्तिपत्रसमेत नदिएको स्वास्थ्य विभागका डा. अर्जुन सापकोटाले जानकारी दिए ।
रावलको नेतृत्वमा आएको टोलीले चितवनका ५० देखि २ सय शय्यासम्मका १२ अस्पतालको अनुगमन गरेको थियो । तीमध्ये चितवन अस्पताल, आशा अस्पताल र सेन्ट्रल अस्पतालले आवश्यक जनशक्ति नराखेको र कार्यरत कर्मचारीलाई नियुक्तिपत्रसमेत नदिएको स्वास्थ्य विभागका डा. अर्जुन सापकोटाले जानकारी दिए । ७ सदस्यीय टोलीले ३ दिनसम्म चितवनका पुष्पाञ्जलि अस्पताल, चितवन अस्पताल, चितवन मोडल अस्पताल, मौलाकालिका अस्पताल, भरतपुर सामुदायिक अस्पताल, सेन्ट्रल अस्पताल, मनकामना अस्पताल, नेसनल सिटी अस्पताल, आशा अस्पताल, शान्ति अस्पताल, नारायणी सामुदायिक अस्पताल र ओएसिसी अस्पतालको अनुगमन गरेको थियो ।
अनुगमन गरिएका कुनै पनि अस्पतालले दरबन्दी पूरा नगरेको पाइएको डा. सापकोटाले जानकारी दिए । ‘डाक्टर, नर्स, प्याथोलोजीका विज्ञहरूको ७ जनाको टिमले तीन दिनसम्म स्वास्थ्य निर्देशिकाअनुसार अस्पताल सञ्चलान भएका छन् कि छैनन् भनेर अनुगमन गर्यौँ,’ उनले भने, ‘अनुगमनमा हामीले निजी अस्पतालको आफ्नो भवन नभएको पायौँ । बेडअनुसारका कर्मचारी छैनन् । भएका कर्मचारीलाई पनि नयुक्तिपत्र नदिई काममा लगाइएको छ ।’
डा. सापकोटाका अनुसार अस्पतालहरूले कुनै पनि सरकारी मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । ‘अप्रेसनका लागि छुट्टै कर्मचारी आवश्यक पर्छ, तर अस्पतालले यो मापदण्ड पनि पूरा गरेका छैनन्,’ डा. सापकोटाले भने, ‘अस्पताल सञ्चालनका लागि राज्यले बनाएको कुनै पनि मापदण्ड अस्पतालहरूले पूरा गरेको अनुगमनका क्रममा पाइएन ।’
डा. सापकोटाका अनुसार अस्पतालहरूले कुनै पनि सरकारी मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । ‘अप्रेसनका लागि छुट्टै कर्मचारी आवश्यक पर्छ, तर अस्पतालले यो मापदण्ड पनि पूरा गरेका छैनन्,’ डा. सापकोटाले भने, ‘अस्पताल सञ्चालनका लागि राज्यले बनाएको कुनै पनि मापदण्ड अस्पतालहरूले पूरा गरेको अनुगमनका क्रममा पाइएन ।’ अस्पतालबाट निस्कने हानिकारक फोहोर आफैँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भए पनि अस्पतालहरूले व्यवस्थापन नगरेको उनले बताए । त्यसैगरी, उनले अस्पताल सञ्चालनका लागि अस्पतालको आफ्नै भवन चाहिने बताए ।
विभागले स्वास्थ्यसंस्था स्थापना तथा सञ्चालन र स्तरोन्नतिसम्बन्धी निर्देशिका २०७० मा व्यवस्था भएबमोजिम अस्पतालहरूको अनुगमन गरेको हो । मापदण्ड पूरा नगरेका अस्पताललाई सुधार गर्न पत्र काट्ने तयारीमा रहेको डा. सापकोटाले जानकारी दिए । विभागले सुधार गर्न दिएका सुझाबहरू पालना नगरेमा ऐनअनुसार कारबाही गरिने उनले बताए ।